Kharashyada Caalamiga ah - BancaNEO
Fadlan ogow in tacriifadaha ugu dambeeya ay yihiin kuwo gorgortan laga geli karo oo ay ku kala duwanaan karaan kiis ilaa kiis. Tariifyada EU waxay khuseeyaan kaliya haddii shuruudaha soo socda la buuxiyo:
Shirkaddu waxay ka diiwaan gashan tahay EU ama EEA; Agaasimayaasha, saamilayda, ka-faa'iideystayaasha ugu dambeeya (UBOs) iyo wakiilada shirkadu waa muwaadiniin iyo deganeyaal EU ama EEA labadaba. Xaaladaha qaarkood, khidmadaha bangiyada dhexe ayaa laga yaabaa in lagu dalaco.
Tariifyada EU sidoo kale waxay khuseeyaan macaamiisha UK.
Soo deji Kharashyada Caalamiga ah